Brother – Tagged "CM" – ICT.com.mm
Brother DCP-T220 Multi-function Printer (Refill Tank System)K330,000
Brother ADS-1700W Wireless Compact Color ScannerK847,000
Brother TZe-231 Labelling Tape Cassette Black on White (12mm)K41,482
Brother FS50 Computerized Sewing MachineK774,556
Brother TZe-751 Labelling Tape Black on Green (24mm)K54,823
Brother DCP-T220 Multi-function Printer (Refill Tank System)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Printer type: Ink Tank; functionality - all in one (print, scan, copy) Refill Tank System Print speeds up to 28/11 ppm (Black/Color) Print resolution up to 1,200...
Brother ADS-1700W Wireless Compact Color Scanner
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ LCD Display: 2.8″ Scanner Type: Sheetfed Duplex Scan Speeds(Black & Color): 50 Simplex scan Speeds(Black & Color): 25 Optical Scan: up to 600 × 600 dpi Interpolated...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Computerised Sewing machine 50 inbuilt stitches and5one-step buttonholes Sewing speed: 850spm & speed control by shutter key Steady penetration power control & stable fabric feeding...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Brother Black text on blue tape 9mm wide 8 metres long Standard adhesive Use the various features of your P-touch labelling machine to print durable labels...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Brother Color: Black on Red 36mm wide, 8m long High quality genuine Brother cassette Ensure clear, durable results Compatible withawide range of Brother’s P-touch...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Brother Color: Black on Red 24mm wide, 8m long High quality genuine Brother cassette Ensure clear, durable results Compatible withawide range of Brother’s P-touch...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Brother Color: Black on Red 18mm wide, 8m long High quality genuine Brother cassette Ensure clear, durable results Compatible withawide range of Brother’s P-touch...
Brother TZe-431 Labelling Tape Black on Red (12mm)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Brother Color: Black on Red 12mm wide, 8m long High quality genuine Brother cassette Ensure clear, durable results Compatible withawide range of Brother’s P-touch...
Brother TZe-421 Labelling Tape Black on Red (9mm)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Brother Color: Black on Red 9mm wide, 8m long High quality genuine Brother cassette Ensure clear, durable results Compatible withawide range of Brother’s P-touch...
Brother TZe-355 Labelling Tape Cassette White On Black (24mm)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Brother Color: White on Black 24mm wide, 8m long High quality genuine Brother cassette Ensure clear, durable results Compatible withawide range of Brother’s P-touch...